China Metal bokotra mpanamboatra, namboarina namboarina bokotra Quotation - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Home >Products >Bokotra>Bokotra vy
Fantsika zoro alika fantsika, rivet, fantsika maranitra. Izy io dia misy fizarana roa: ny fantsika fantsika (sombintsombiny A) sy ny ambany fantsika (sombin-javatra B). Matetika miaraka amina bucket I, bucket jean ampiasaina amin'ny akanjo matevina kokoa, toy ny pataloha jeans, pataloha jeans sns.
Katsaka, fantatra koa amin'ny hoe gazy, mason'omby, rivet hollow; Araka ny endriny dia: rivet lava, rivet kely, zana-tsindry manodidina, varimbazaha boribory, katsentsitra oval, katsaka fisaka, katsaka mihodina, katsaka boribory, katsaka voninkazo sns. Araka ny fitaovana: katsaka vy, katsaka aluminium, katsaka varahina, katsaka firaka zinc, katsaka vy tsy misy fangarony, katsaka plastika sns
Buttons Snap Metal
Fitaovana: vy / varahina
Size: 10mm + 655, 12.5mm + 633, 15mm + 831, na toy ny takian'ny mpanjifa
Loko: Nikela, volamena, varahina fahagola, metaly basy, loko namboarina